Hamarana ny tantarany ao amin’ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra i Andriatsima Faneva Ima ny sabotsy 16 novambra 2019, mandritra ny lalao iraisam-pirenena hihaonan’i Barea Madagasikara sy ny Walya Etiopianina hatao eo amin’ny kianja monisipaly Mahamasina Antananarivo. Io no lalao farany handraisany anjara amin’ny Barea ka hisaorany sy hanaovany veloma ireo namolavola azy tamin’ny baolina kitra, ireo mpiara-milalao aminy tao anatin’ny ekipam-pirenena, ireo mpanazatra nifandimby, ny federasionina malagasy ny baolina kitra, ireo mpanohana sy mpankafy baolina kitra malagasy, araka ny taratasy nosoratany omaly. Kapitenin’ny Barea i Andriatsima Faneva Ima, lohalaharana afovoany mitondra ny laharana faha-9 izy. Isany nanamarika ny tantarany tao amin’ny ekipam-pirenena malagasy ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika taona 2019 tany Egypta. Tonga teo amin’ny ampahefa-dalana ny Barea an’i Madagasikara.
Nanamaloka ny andro faha-14 amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Belzika (Pro League) amin’ny diviziona volohany, sokajy A amin’ny baolina kitra, ny horakoraka fanavakavahana, nataon’ny ampahana mpijery, nihatra tamin’i Marco Ilaimaharitra, nandritra ny fihaonan’ny Sporting Club Charleroi klioba ilalaovany sy KV Malines. Niezaka nanazava tamin’ny mpitsara afovoany ny zava-mitranga i Marco Ilaimaharitra. Izy indray no nahazo karatra mavo taorian’izay. An-dranomaso no nivoahan’i Marco Ilaimaharitra ny kianja, namonjy ny efitrano fiomanana naterin’ireo namany. Nirava ady sahala 2 noho 2 ny ekipa roa tonta.
Hotanterahina ao amin’ny kianja monisipalin’i Berkane any Maroc ny lalao famerenana eo amin’ny RS Berkane avy any Maroc sy ny Fosa Juniors Madagasikara, amin’ny lalao savaranonando hiadiana ny tapakila hidirana anaty vondrona amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona afrikanina amin’ny baolina kitra 2019-2020. Efa manan-tombo an’isa 2 noho 0 ny Fosa Juniors Madagasikara manoloana ny RS Berkane nandritra ny lalao mandroso notanterahina teny amin’ny kianjan’ny Cnaps Vontovorona tamin’ny 27 oktobra 2019. Ny zoma lasa teo no efa nanomboka nitsapa kianja sy nanao fanazarantena teo amin’ny kianja hilalaovana anio amin’ny 9ora alina, ora eto Madagasikara, ny Fosa Juniors.
Resin’ny Fosa Juniors Madagasikara tamin’ny isa 2 noho 0 ny RS Berkane avy any Maroc tamin’ny lalao savaranonando mandroso hahazoana tapakila hidirana anaty vondrona amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona afrikanina amin’ny baolina kitra 2019-2020. Baolina matin’i Jean Yves teo amin’ny minitra faha-11, nampian’ny « Penalty » nodakan’i Baggio no nahazoan’ny Fosa Juniors ireo isa roa nitondra ny fandreseny androany, tamin’ny lalao notontosaina teo amin’ny kianjan’ny Cnaps Vontovorona. Nahazo « Penalty » ihany koa ry zareo Maraokanina saingy voatohan’i Fabrice, mpiandry haraton’ny Fosa Juniors ny baolina ka tsy tafiditra. Manantombo hiatrehana ny lalao miverina ny Fosa Juniors. Tonga nijery nivantana ity lalao androany ity teny Vontovorona ny filohan'ny kaonfederasiona ny baolina kitra, Ahmad. (Jereo Sary Tohiny)
Resin’i Afrika Atsimo tamin’ny isa 19 noho 16 i Pays de Galles androany nandritra ny lalao manasadalana faharoa natao androany alahady 27 oktobra 2019 amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny taranja rugby andiany faha-9, izay tanterahina any Japon ny 20 septambra 2019 hatramin’ny sabotsy 2 novambra 2019. Nivoaka nandresy tamin’ny isa 19 noho 7 koa i Angletera nanoloana an’i Nouvelle Zélande. Hanao ny famaranana i Afrika Atsimo sy Angletera, lalao hatao amin’ny sabotsy 2 novambra 2019. Izay tafavoaka mpandresy eo no tompondaka vaovao handimby an’ny All Blacks avy any Nouvelle Zélande. (Jereo Sary Tohiny)
Mpiasan’ny Ministeran’ny Mponina Rasoarivelo Jeanne Pierrette. Nibata amboara sy medaly volamena roa izy tamin’ny taranja hazakazaka 400 m sy 800 m nandritra ny fifaninana ara-panatanjahantena ho an’ny mpiasam-panjakana nokarakarain’ny ASIEF (Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaires) ary notanterahina tany Antsiranana ny 07 hatramin’ny 20 Oktobra 2019. Natolotry Rasoarivelo Jeanne Pierrette an’ny minisitry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsôsialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy Naharimamy Lucien Irmah ny amboara. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 23 octobre 2019 20:05
ASOIMI 2019: Miseho amin'ny endriny vaovao
Niverina amin'ny endriny vaovao indray ilay lalao ASOIMI, fanatanjahantena ifaninanan’ny samy mpiasam-panjakana, izay efa ho 20 taona nisiana izay. Antsirabe no nisantatra izany, ka isan'ny nampiavaka izany ny fisokafana amin'ireo orinasa tsy miankina. Nanomboka ny sabotsy 19 oktobra teo izany, ary hitohy hatramin’ny zoma 25 oktobra. Toerana roa no hanaovana ny hetsika, dia ny ao amin'ny ENSOA sy ny ACMIL Antsirabe. Ny baolina kitra, atletisma, tenisy, tsipy kanetibe, baskety ary ny dihy ara-panantanjahantena no hifaninanana amin'izany, ankoatry ny lalaon-tsaina isan-karazany. Nambaran-dRalaidosy Jean Claude fa tsy hifanitsaka amin'izay hetsiky ny mpiasam-panjakana izy ireo, satria efa nahazo fankatoavana tany amin'ny ministeran'ny Ati-tany, ary efa niova ihany koa ny anarana hoe: « Association Sportive Otronin'ny Mpiasa Iray tanjona », izy ireo ankehitriny. Ny zoma izao moa no hanaovana ny famaranana rehetra sy ny fanolorana amboara hoan'ireo mpandresy amin'izany.